Tetikasa - Cangzhou Ruichen Electronic Equipment Co., Ltd.
Case-1 an'ny mpanjifa
Ity dia fampisehoana finday fikolokoloana eo aloha napetraka ao amin'ny efitrano fihaonambe. Ny haben'ny efijery amin'ny ankapobeny dia 5120 × 1280mm ， Ity efijery fampisehoana ity dia mora ampiasaina sy mitazona, miaraka amin'ny fisaka avo sy fisehoana mazava, izay derain'ny mpanjifa ao Cape Town.
Case-2 an'ny mpanjifa
Ity dia fampisehoana ivelany napetraka ao amin'ny faritr'i Johannesburg. Ity fampisehoana ity dia misy fiatraikany anti-harafesina sy fanoherana harafesina tena tsara, ary ny fanombanana tsy tantera-drano dia mety hahatratra IP65.
Case-3 an'ny mpanjifa
Ity dia ekipan'ny efijery fampisehoana miolakolaka p3.91 an-trano. Ho an'ny fampisehoana kely an-trano, ny zava-dehibe indrindra dia ny fisian'ny fisehoana. Ny arc amin'ity kabinetra miendrika arc ity dia azo ovaina arakaraka, ary ny elanelana misy azy dia 10 ° arc hatramin'ny 15 ° arc.